Search Results - DailyNews Live
Articles tagged 'anne nhira'
I am scared of Mugabe: Zodwa 12 November 2017 HARARE - Controversial South African socialite Zodwa Wabantu says she called off her three-city tour of Zimbabwe which was set for this weekend because of her fear of President Robert Mugabe. Zodwa was scheduled to make an appearance at Private Lounge Harare last night before heading to the re...
Zodwa cancels Zim tour 10 November 2017 HARARE - Controversial socialite Zodwa Wabantu will disppoint her multitudes of fans after she cancelled her Zimbabwe tour which was suppossed to kick start tomorrow and end on Sunday in Bulawayo. The diva has cancelled the shows; Private lounge Harare today, Club 263 Mutare tomorrow and Club ...
Zodwa's second Zim coming 6 October 2017 HARARE - Controversial South African socialite Zodwa Wabantu, who sensationally called off a tour of Zimbabwe last month, may finally come to the country as part of DJ Tira's entourage. DJ Tira, who manages Zodwa Wabantu's affairs, is scheduled to perform at Club Connect in Bulawayo on October...
Anne Nhira relishes victory over Zodwa 9 September 2017 HARARE - Actress Anne Nhira, who successfully applied to government so they bar South African socialite Zodwa Wabantu from taking part in the 10-day Harare International Carnival which ends today, is celebrating the cancellation of the controversial Durban personality's Zimbabwean tour. The fo...
Zodwa's no-panties trademark divides nation 7 September 2017 HARARE - Zimbabweans recently woke up to a panties debate involving South African socialite Zodwa Wabantu that has roped in Cabinet ministers, the Censorship Board of Zimbabwe and the country's Tourism ministry. The debate was triggered by an invitation extended to Zodwa by the Zimbabwe Touris...
Govt okays Zodwa visit 5 September 2017 HARARE - South African socialite Zodwa Wabantu will not be stopped from coming to Zimbabwe despite a ban imposed on her by the Board of Censors, government disclosed yesterday. This comes after the Board of Censors barred Zodwa from participating in the ongoing Harare International Carnival on...
I'm coming to Zim: Zodwa 4 September 2017 HARARE - South African socialite Zodwa Wabantu insists that her visit to Zimbabwe is still on as her contract with the tour promoter has not been cancelled. The Board of Censors banned Zodwa from participating in the Harare International Carnival on the basis that her signature look — short dr...
Zodwa ban — Too much censorship emerging in Zim 4 September 2017 HARARE - The Aeneas Chigwedere-led Board of Censors has unleashed controversy by banning South African socialite Zodwa Wabantu from performing at the Harare International Carnival. Apparently, the board —whose vision is to be the best providers of moral guidance and advisers to the public on e...
Zodwa ban: Nhira attacked 31 August 2017 HARARE - Local actress Anne Nhira, popular for starring in the local soapie Studio263 as Vimbai Jari, is under fire for attempting to block South African dancer and socialite Zodwa Wabantu from participating at this year's edition of Harare International Carnival. The carnival is scheduled for...
No directive to stop Zodwa: Kaseke 31 August 2017 HARARE - Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) has sensationally said they are not aware that there is a directive to stop South African socialite Zodwa Wabantu from attending the Harare International Carnival. A letter from acting Tourism minister Patrick Zhuwao (see page 18) circulating on social...
1. ED invites Chamisa for crucial meeting 1,546
2. Zim must consider SA option seriously 1,125
3. Chihuri holed up in Malawi 700
4. Ravaging soldiers raise more Zim ire 488
5. I can't pay $1 500 child support: Wadyajena 483